Yako Ikambani Blog Blog Kana Hupenyu Hwako Huchitsamira Pairi? | Martech Zone
China, Kurume 15, 2007 Chishanu, December 15, 2017 Douglas Karr
Kune vamwe vanhu vanofunga kuti mabloggi akavakirwa pasi mudzimba dzepasi pedu nemabhokisi akavhurika epitsa uye Mountain Dew kwese kwese. Pane kumwe kuona kwema blogger kwaungave usiri kuziva nezvako. Blogger vanhu vehukama vanoshuvira kutaurirana (uye dzimwe nguva kutarisisa!).
Nhasi, ndanga ndiine musangano wakanaka wemangwanani nevamwe vanhu vanobva Pfungwa Dzinopinza. Ndakave nemukana wekukurukura zvakaitika kwandiri pakubloga neboka uye nekupa imwe nzwisiso mumazano emakambani ekublogi. Iyo hurukuro yakagamuchirwa kwazvo uye ndakainakidzwa zvakanyanya.
Chinhu chinonakidza pamusoro peiyi hurukuro ndechekuti zvese zvakaitika kubva kublogga. Vanhu vaivepo vaibvira pamupurofesa mukuru wedhipatimendi paBall State University kuenda kumumiriri weIT kubva kufekitori inogadzira. Ndakanga ndichitya zvishoma - ivo vaida kuziva, kuziva uye kuita (zvechokwadi Sharp Pfungwa!). Ndingadai ndisina kumbosangana nevanhu ava dai zvisiri zvekubloga.
Ndakatanga blogging. Ini ndakazobatsira Pat Coyle kublog. Tose pamwe chete takatanga bhurogi rakavhurika revanhu veIndipolis kuti vataure nyaya yavo kuti sei vaida guta. Pat akasangana naRon Brumbarger, Mutungamiri uye CEO we Zvishoma nezvishoma Mhinduro uye takakurukura blogging yangu. Ron anotungamira Sharp Pfungwa kuunza pamwechete vanhu mudunhu kuzokurukura tekinoroji uye vakafunga Corporate Blogging ingave iri musoro wenyaya kuti vakurukure. Saka Ron naPat vakadya neni masikati uye takazvigadzira.
Zvese kubva kublogging.
Paive nemikana kune vese vaivapo uye mazhinji emeso avo akavhenekerwa. Vamwe vakanyora mapeji ezvinyorwa. Ndakaona misoro ichidzungudza (pamwe imwe kubva pakufinhwa 😉 - havazi vese vanofadzwa nekubloga sezvandinoita). Waive mukana wakanaka uye rakanakisa boka revanhu rekukurukura nezve tekinoroji iyi.
Zvakawanda zvekukurukurirana zvakanangana nekutya kwemakambani kutora danho iri - ihombe. Sezvo nechero chiito chekutanga, blogging inoda zano uye mamwe marongero mukati mekambani. Zvaitwa nemazvo, iwe unosundidzira kambani yako uye iwe kumberi sevatungamiriri vanofunga muindasitiri yako, uve wekutanga maikorofoni pane hurukuro dzakatenderedza chigadzirwa chako, uye nekuvaka hukama hwehukama nevatengi vako uye tarisiro.
Ini ndinofunga kumwe kwekuziva kwatakauya ndekwekuti makambani anoda kukumbundira nekutora matekinoroji matsva pane kusundidzirwa mukati mawo nekutya. Mumwe muenzaniso waive Kurambidzwa kwaKent State kuvatambi vavo kutumira paFacebook. Fungidzira kana maneja aine mukana weku kukurudzira uye kuongorora Zviito zvevatambi paFacebook pachinzvimbo. Izvo hazvingazove inonakidza yekutsvaga zviwanikwa? Ndofunga kudaro.
Sezvandaitaura napurofesa kubva kuBall State, ndakafunga kushamisa kwaizoita kuona Freshman mablog paInternet, kudzidzisa vadzidzi vepachikoro chepamusoro paKoreji hupenyu, kusavapo pamba, uye zviitiko zverusununguko uye koreji. Iyo blog ine simba!
Zvakare, blogging yangu yakandiisa ku Indiana Humanity Kanzuru manheru ano kwandakasangana naRoger Williams, Mutungamiri we Inotungamira Hutungamiri Sisitimu. Roger anoshandisa masocial network kurongedza uye kuvaka nharaunda dzake dzevatungamiriri vadiki mudunhu iri. Wow!
Ndakasanganawo nevamiriri kubva Kubatsira Vasina Misha Veterans neMhuri, Sangano risingadaviriki rinobatsira varwi vasina pekugara kuti vadzokere netsoka dzenguva refu dzekupa mazano nekuchengetedza. Ivo parizvino vane zana nemakumi mana vets vasina pekugara muchirongwa chavo, vachivapa chikafu, pekugara, kupihwa basa, nezvimwe.
Kuda kweiyi isiri purofiti kwaishamisa uye ndakakurudzirwa kuti vese vakaona sei mukana muhunyanzvi. Paive neimwe dichotomy pakati pemapoka maviri aya. Boka remangwanani rakanga riine mabhizimusi akabudirira aifarira kuziva nezve tekinoroji nyowani uye, pamwe, kunetsekana zvishoma nezve izvo zvinounza matambudziko matsva. Boka remanheru raive nenzara yeinotevera tekinoroji iyo yaizovabatanidza nevamwe vanhu nekukurumidza uye nemazvo.
Ini ndinofungidzira kana bhizinesi rako riri rekuchengetedza Vet kana kutsvaga chinotevera chikafu kune mumwe munhu ane nzara, chero hunyanzvi hwunobatsira hwakakura.
Tags: mhinduro dikiBloggingkubatanidzwa blogginghutungamiri hunobudaveterans vasina pekugaraindianapoliskent nyikapat coylepfungwa dzakapinza
Hapana Mumwe Ane Hanya NeBlog Rako!